Sidee Kor Ugu Qaadi Kartaa Hamigaaga - Daryeel Magazine
Sidee Kor Ugu Qaadi Kartaa Hamigaaga
Hadaynu nahay dadka af soomaliga ku hadla dhamanteen waxaa ina wada haysta dhibatooyin aan yarayn. dhibatooyinkaa sadex meeloowd oo meel waa sida aynu u fikirno. Marka la eego boqolkiiba waxaan ka badnayn 2% ayaa ah dad wax haysta oo amaba aaynu odhankarno waa dad ku nool nolol. imisa qofbaad garanaysaa oo ku nool nolol fiican? mase ku hamiday waligaa inaad isbadal noloolee u samayso dhinaca dabaqada kaa saraysa? hadanay waligaa ku soo dhicin niyadaada malaga yaabaa inaad imiga goaansato? meesha aad doonto aad kaga jirtid dabaqadaha nololeed ee ka jira dhulkeena waxaa hubaal inay baahi aad u wayni kuu hayso inaad wax u qabato naftaada iyo dadkaad jeceshahay. hadii aad nolo aan xumayn ku jirto waxaad rabtaa inaad ka sii fiicnaysiiso balse ta kaliyaata ee aad u baahan tahay waxaa weeyi inaad go aan adag ka joogsato oo aad tidhaa. “INTAY DOONTO HA IGU QADATO EE WAAN SAMAYNAYAA WAXWALBA OON KU GADHAYO MURADKAYGA.”
Markaad goaan adag ka gaadho inaad samayso waxwalba oo aad ku kobcinayso naftaada, Magac ahaa iyo maal ahaan labadaba wax ku hor istaagi karaa ma jiro sababtoo ah markaad naftaada aminto ee aad go’aan adagna ka gaadho wax, cidalaala iyo cid ku horjoogsan kartaa ma jirto, sababtoo ah tani waxay ka mid tahay awoodeena uu ilaahay ina siiyay binu aadan ahaan. HAA dad fara badan oo ay ka mid yihiin dad aad aad u jeceshay way kugu qosli doonaan, Mara uu qof kugu yidhaaa waxaasi waxaad samayn karto ma ah, u arag in ay na lahayn hami gaadhsiiya halkaas.
Sida dhamaan lagu bilaabay shirkadaha waa wayn ee dunida HONDA waxay uu la soo maray ninkii sameeyay oo maga ciisa la yidhaa Soichiro Honda dhibaato aad u badan, 1938 isagoo wali ku jira iskuulkii uu ka barayaanay makanik nimada ayaa, Soichiro Honda uu ku bixiyay dhamaan wuxuu hanti haystay inuu sameeyo Bastoonka baabuurta. hamigiisu waxuu ahaa in uu samayeeyo bastoon dabadeedna uu ka iibiyo shirkada wayn ee iyaduna baabuuurta soo sarta ee Toyota. Maalin iyo habeenba wuu u salalay si uu u sameeyo Bastoon u qalma tayada Tayota balse nasiib daro markii uuu dhameeyay ee u u geeyay tayoota waxay u sheegeen in Bastoonka uu sameeyay uu tayadiisu aanay u qalmin tayote.
Dabadeedna waxuu ku noqday iskuulkii isagoo dhamaan ardaydii uu wax la dhiganayay iyo macalimiintiiba ay ku qoslayaa iyagoo ugu yeedhaaya doqon. Mr Soichiro Honda dhag jala uma siin, waxyarka dib ayuu ku noqday howshuu culusayd uu oo markaan aad ugu siitalo galay.laba sano oo shaqo aad u adag kadib waxuu soo saray Bastoon qiimo le, tayoto ayuu u geeyay iyadoon wali kontaragii anay tayoota la saxeexan balse aya la saxeexanayaan ayuu Maraykanku uu weeraray Jabaan, Dagaalka ka dib shidaal yaraan aad u badan baa soo waajahda Jabaan markaasa wax kale iska daayoo uu baabuurkiisii kaxaaysan kari wayay. halkii baaburk ayuu ku badashay in uu samaysto baskiilad yar oo mashiinyar uu ku rakibay si uuu bal uu uu reerkiisa uu cunto ugu soo qaado, markaasay jarkiisii waydiiyeen inuu iyagana u sameeyo. waa hagaag buu yidhi, in tuu iska dhafay Bastoonkii ayuu motooyin yaryar sameeyay, balse waxay noqdeen qaan aan si daa loo iibsan, Waxuu waraaqo u diray shirkadahii yar yaraa ee motooyinka iibiya si ay wax u gu darsadaa fikradiisa, way ku darsadee markasuu Honda sameeyay motooyin meel walba laga iibsado.
Sidaad ka dhadhan san karto sheegadaa, Honde waxaa uu ahaa nin goaan adag ka gadhay sidii uu u meel marin lahaa muraadkiisa waxkasta oo horjoogsadaana aanay u niyad jabin karin. ugu dan bayn tiina uu ku guulaystay inuu sameeyo shirkad ka mida shirkadaha ugu waawayn aduunka waliba kuwa halka hore kaga jira.
Hadii ay boqdinu kugu nabtay waxaanad jeclayn, ha ahaado shaqo aanad jeclayn amaba xidhiidh dad aanada jeclayn, waxaa ogaa taa inay noloshu ay tahay wakhti kooban oo aad u qaaliya. waxaan kugu dhiiri galinayaa in aanad marnaba ka niyad jabin waxaad jeceshay shaqada ay kaaga baahantahay awgeed, sababtoo ah hawshasi waa wakhti kooban balse waxaa niyada ka diidantahay ood naftaada ku qasbaysaa waa wax aan intaad dunida guudkeeka ku nooshahay kugu taagan.
Ilahay baa mahadle.
Sidee U Hagi Kartaa Noloshaada? QEYBTII 2-AAD Sidee U Hagi Kartaa Noloshaada? Sidee U Noqon Kartaa Qof La Jecelyahay?